PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အင်္ဂလန်က သတင်း စာတွေက ဤသို.မြင်သည်။ THE INDEPENDENT NEWS
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အင်္ဂလန်က သတင်း စာတွေက ဤသို.မြင်သည်။ THE INDEPENDENT NEWS
အင်ဒီပန်းဒန်. သတင်းစာ ကို သင်.အောင်ပြန်ဆိုထားပါသည်။ aye aye soewin
ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာထွက် ပြီးသည်.နောက် တနိုင်ငံလုံးက ပြည်သူတွေက သူမကို အလွန် ဒေါသထွက် စိတ်ဆိုးနေတဲ.အရှိန် ထိုးတက်လာခဲ.တာ မြန်မာ.ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်စု ခု သိသွားပါပြီ။
သူမ ကြီးမှုးတဲ. ကော်မရှင်အဖွဲ.ဟာ ဆန္ဒပြသူအများအပြားကို ထိခိုက် ဒဏ်ရာရအောင်လုပ်ခဲ.သူတွေကို အရေးယူပေးဖို.ပျက်ကွက်တဲ.အပြင်၊ လူတွေအကြီးအကျယ် ကန်.ကွက်တဲ. တစ် ဘီလီယံတန်ဘိုး ရှိ မုံရွာ ကြေးနီတောင် စီမံကိန်းကို ဆက်ခွင်.ပြုရမယ်လို. တိုက်တွန်းခဲ.တာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း မှာ ဆန္ဒပြသူတွေကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ.၀င်တွေက မီးသတ်ကား ရေပန်းတွေ မီးလောင်ဗုံးတွေ သုံးပြီး အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခဲ.အပြီးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြီးမှုးတဲ. ကော်မရှင် တစ်ရပ်ကို ဖွဲ.ခဲ.တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကြေးနီမိုင်းဟာ ရန်ကုန်နဲ. မိုင်ပေါင်း ၄၅၀ ကွာဝေးပြီး မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာ အကြီးဆုံးသတ္တုမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစစ်တပ်ပိုင်စစ်ကုမ္ပဏီ နဲ. တရုတ်လက်နက်ခဲယမ်းကုမ္ပဏီ၏ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒေသခံရွာသားတွေက ဒီကြေးနီတောင် စီမံကိန်းကို လုံးဝမလိုလား၊ ဆန်.ကျင်ခဲ.ကြတာကြာပါပြီ။ ဒီစီမံကိန်းကြောင်. သူတို. ပိုင် လယ်ယာခြံမြေ ဧက ၈၀၀၀ ကျော် မတရား အသိမ်းခံရတယ်။
လူပေါင်းထောင်သောင်းချီပြီ ယာမဲ. မြေမဲ. အိုးအိမ်မဲ.ဖြစ်ခဲ.ရပါတယ်။ ဒီ.အပြင် သူတို.ကျေးလက်ဒေသ တခုလုံးမှာ သဘာဝ ရေမြေ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်ဆီးမှု တွေက တားမန်ုင်ဆီးမရဖြစ်ခဲ.ရပါတယ်။
ဆန္ဒပြ သူတွေ သိမ်းထားတဲ. သပိတ်စခန်းကို အကြမ်းဖက်လုံခြုံရေးတပ်သားတွေက ပြီးခဲ.တဲ. နိုဝင်ဘာ မနက်မိုးမလင်းခင်မှာ ရေနှင်. မီးလောင် ဓါတ်ပြုစေသော ဖော.စဖရပ်သုံး ပြီး ဖြိုခွဲခဲ.တာဖြစ်ပါတယ်။
လူပေါင်းများစွာ ဒါဇင်နဲ.ချီပြီး အရေပြား မီးလောင်ဒဏ်ရာရခဲ.ပါတယ်။
တနိုင်ငံလုံးက ဒီလို လုပ်ရပ်ကို အပြင်းအထန်ရှုံ.ချတဲ.အခါ သမ္မတသိန်းစိန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကော်မရှင်ဖွဲ.ပေးပြီး စုံစမ်းသမှုပြုစေခဲ.ပါတယ်။ ဒါပေမဲ. ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာကြောင်. မီးလောင်ရာလေပင်.ဆိုသလို လူတွေဖက်ကပိုပြီးတောင် မကျေနပ်မှုတွေကို ပြသထုတ်ဖေါ်နေကြပါတယ်။
အစီရင်ခံစာထဲမှာ မီးလာင်ဗုံးများတွင် ဖော.စဖရပ်ပါဝင်လို.ရေနဲ.ထိတွေ.
ဒီဗုံးမျိုးကို သုံးစွဲခဲ.သူရဲတပ်ဖွဲ.အား အရေးယူခြင်း အလျဉ်းမရှိတဲ.အတွက် လူတွေက ပို စိတ်ဆိုးကြပါတယ်။
အစိုးရဖက်ကတော. အစီရင်ခံစာမထွက်ခင်အထိ သူတို.သုံးခဲ.တာ ဖေါ.စဖရပ်ပါဝင်တဲ. မီးလောင်ဗုံးမဟုတ်ပါဘူးလို. ဗြောင် ငြင်းဆိုခဲ.တာပါ။ ခုတော.၊ အစီရင်ခံစာက သူတို. အစက ငြင်းထားတာကို ၀န်ခံခဲ.တယ်။
ဒီ.အပြင်- ကျူးလွန်ခဲ.သူတွေကို အရေးယူဖို. တလုံးမှ မဆိုထားတဲ. ကော်မရှင်ကပဲ ဒီမိုင်းလုပ်ငန်းကို ဆက်လက်ခွင်.ပြုလုပ်ဆောင်ရမယ်လို. အကြုံ့ပြုခဲ.တာမို. ဒီအချက်က
အစီရင်ခံစာက မိုင်းလုပ်ငန်းကြောင်. သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်မှု ရှိကောင်း ရှိနိုင် မယ်လို. ခန်.မှန်းထားပေမဲ. တဖက်မှာလည်း ဒေသခံတွေ အတွက်အလုပ်အကိုင် အခွင်.အလန်း တွေ ရရှိနိုင်ကြောင်း၊ ချွေးသိပ်ပြခဲ.ပါတယ်။
ဒီ.အပြင်၊ မဟာဗျူဟာမြောက်တရုပ် နိုင်ငံကြီးနဲ. သင်.မြတ်ဖို.လိုတယ်ဆိုတဲ.အချက်ကို အခြေခံပြီး လုပ်ငန်း
ရပ်လိုက်ရင် တရုပ်နဲ.တင်းမာမှု ဖြစ်မှာ။ မရပ်သင်.၊ မဖြစ်သင်.လို.ဆိုတဲ. ဆင်ခြေပေးခဲ.တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အစီရင်ခံစာ က မြေယာ ဆုံးရှုံးတဲ. တောင်သူလယ်သမားတွေကို နစ်နာကြေးရော်ကြေးပေး သင်.ကြောင်း တင်ပြခဲ.ပါသေးတယ်။
ဆန္ဒပြခဲ.သူတေါကတော. ဒေါသတကြီးနှင်.ဒီအစီရင်ခံစာကို တုန်.ပြန်ကြပါတယ်။ အထက်မြန်မာပြည်ကရှေ.နေ ကိုသိန်းသန်းဦးက ဧရာဝတီသတင်းဌာနကို ဤသို.ဆိုပါတယ်။
--ကော်မရှင်ရဲ.အဖြေက လုံးလုံး မလုံလောက်ဘူးဗျ၊ ကော်မရှင်.၏တွေ.ရှိချက်တွေအပေါ်ကျန်ာတို. သွားအားကိုးနေလို.မရတော.ဘူး။ သူတို.က ဆန္ဒပြသူတေါက ဥပဒေကိုချိုးဖေါက်တယ်တဲ.။ ကဲ-ဒါဆို ရဲ ကရော ဥပဒေမချိုးဖေါက်လို.လား။ အစိုးရက နှစ်ဖက်စလုံးကို သေသေချာချာ စုံစမ်းစစ်ဆေးပြိး ထိုက်သင်.သလို ပြစ်ဒဏ်ပေးသင်.တယ်--
အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းတဲ.ညက ဆန္ဒပြသူတွေထဲက တဦးဖြစ်တဲ. သံဃာ ဦးဇာဝနက တော. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေဖြင်. အောက်ခြေကလူတန်းစားတွေ ဘယ်လို ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာ သိဖို. မျက်စေ.ဖွင်.ကြည်.သင်.ကြောင်း၊ ဒေသခံလယ်ယာတောင်သူများအနေနဲ.
ကော်မရှင် ၏တွေ. ရှိချက်တွေဟာ လုံးလုံးလက်ခံနိုင်စရာမရှိကြောင်း ပြောခဲ.ပါတယ်။
-- ဦးဇင်း မနက်ဖန်ကျရင် ဒေသခံ တွေနဲ. ဘာဆက်လုပ်သင်.သလဲဆိုတာ သွားတွေ.ဆွေးနွေးကြည်.ပါဦးမယ်။ ဦးဇင်းတို.ဒေသခံတွေကတော. ဆက် ဆန္ဒပြရမှာပါပဲ--လို. မိန်.ဆိုခဲ.ပါတယ်။
သမ္မတသိန်းစိန်လက်ထက် ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်နေပါတယ်လို.ပြောနေလျက်ကပဲ လူတွေဆန္ဒပြနိုင်ခွင်.ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ငြင်းပယ်ပြီး ဒီလို ဆန္ဒပြခွင်.တွေကို နိုင်ငံမှာ အကန်.အသတ်ကြီးစွာ ထိန်းချုပ်ထားဆဲဆိုတာကို လက်ပံတောင်း တောင် အကြမ်းဖက်မှုက သက်သေခံခဲ.ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော.၊ သူမ ယူထားတဲ. အခန်းကဏ္ဍအရ ဒီလာမဲ. ဗုဒ္ဓဟူးမှာ ကြေးနီတောင်မိုင်းတွင်းတွေစီသွားပြီး စကားပြောဆိုရဦးမှာပါ။ အဓိကကတော.၊ ပြီးခဲ.တဲ. မနှစ်နွေဦး မြန်မာလွှတ်တော်မှာ အရွေးခံရပြီးကတည်းက ပင်မနိုင်ငံရေး စည်းထဲက သူမလုပ်ခဲ.သမျှ အပေးအယူနည်းနာတွေကို (ရွာသူရွာသားတွေအား) အထူးပြု ပြောကြာ:မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Burmese democracy leader Aung San Suu Kyi has found herself at the centre of mounting anger after an inquiry panel she headed suggestedacontroversial $1bn copper mine should be allowed to continue and failed to punish police who had injured protesters.
The investigation was established last November after dozens of Buddhist monks and other campaigners were injured when police used water cannon and smoke canisters to halt protests at the Letpadaung mine, 450 miles north of Rangoon. The mine, the largest in the country, is operated jointly between China North Industries Corp,aweapons manufacturer, andasubsidiary of the Burmese military.
Villagers and other protesters had opposed an expansion of the mine, saying the move would take away 8,000 acres of land, leaving large numbers of people homeless and would do widespread environmental damage.
The site was for month occupied by villagers and protesters. But in late November last year, the authorities dispatched police to clear the campaigners. They did so using water cannons and smoke shells that contained phosphorous. Dozens of protesters suffered serious burns asaresult.
Amid widespread condemnation of the crackdown, the government of President Thein Sein asked Ms Suu Kyi to headapanel to investigate what had happened and to make recommendations. Yet the panel’s suggestions, reported in state-owned Burmese language newspapers, have already sparked more controversy.
While the report confirms that phosphorous-based smoke munitions were fired at protesters – something initially denied by the Burmese government – it does not recommend any punishment for the police. More significantly it suggests that the mine expansion should be allowed to proceed.
The report makes this recommendation despite noting the likely environmental damage that will follow and the fact that it will create few jobs for local people. Rather, it does so on the basis that scrapping the expansion could add to tension with China, an important strategic partner. It says local people should be adequately compensated for land that was taken from them in 2010 when the mine project started and for any more lost in the expansion.
Those involved in the protests have responded angrily. “This commission result is not enough and we can’t rely on them,” Thein Than Oo of the Upper Burma Lawyers Network, told the Irrawaddy news website. “If the protesters violated the law, how about the riot police? They also violated the laws. The government should investigate both sides and mete out the punishments.”
Zavana,asenior Buddhist monk who was among the crackdown victims, said the report’s findings were unacceptable to local farmers. He urged Ms Suu Kyi not to “close her eyes” to the suffering of ordinary people. “I will go and meet local people tomorrow here. Then, we will discuss what to do next. We will continue our protest,” he said.
The rallies at Letpadaung and the crackdown on them were widely seen as an indication that the rights of citizens to protest government policies remain limited in Burma, despiteaseries of democratic reforms enacted by Thein Sein.
The role of Ms Suu Kyi, who will on Wednesday reportedly visit the mine site, also highlighted the compromises she has been obliged to make since entering mainstream politics and being elected to the parliament last spring.
Posted by PNSjapan at 4:59 PM